Blaogy Sokwanele Tao Zimbaboe · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Septambra 2018 7:25 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny Martsa 2005)
Ao am-piomanana ho amin'ireo fifidianana solombavam-bahoaka hatao ny 1 aprily 2005 i Zimbaboe. Tsy misy isalasalàna ny ho vokatra. Ny ankamaroan'ireo mpanara-maso dia miandry avokoa fa ny antoko Zanu-PF-n'i Robert Mugabe eo amin'ny fitondrana no hahazo ny fandresena mavesatra, hahazo fara-faharatsiny ny 75%-n'ireo vato. Tsy hoe satria manana ny lazany manokana akory ny antoko Zanu-PF, fa satria rakotra kolikoly ny zotran'ny fifidianana ka tsy ahafahan'ny mpanohitra handresy mihitsy. Voasakana tsy hanao famoriambahoaka ireo mpikambana amin'ny antoko mpanohitra MDC ary atahorana ho voasambotra, hofonjaina sy hampijaliana ireo mpikatroka.
Ireo mpifidy ivelan'ny firenena – mitontaly 3,5 tapitrisa, izay maro no mpanohitra – dia voasakana tsy hifidy mandritra an'ireo fifidianana ireo. Mandray anjara izy ireo amin'ny fanoherana “fandatsaham-bato amin'ny SMS” mba hanehoana ny hamafin'ny fanohanan'ny mpanohitra avy any ivelan'ny firenena. Tsy misitraka ny zony hifidy tsotra izao ihany koa ireo mpifidy ao amin'ny firenena, tsy maintsy mampiseho taratasy avy amin'ireo mpampiasa na ireo tompony mialohan'ny hamelàna azy ireo handatsa-bato… fanamby iray ao amin'ny firenena izay ireo mihanaka be tokoa ireo tsy manakialofana ary 80% ny tsy fananana asa.
Niantso an'ireo vahoakan'i Zimbaboe ny Arseveka Pius Ncube mba hijoro mandritra ny revolisiona tsy misy herisetra hanoherana an'i Mugabe. Mihevitra izy fa efa nahodin'ny antokon'i Mugabe ny vatom-pifidianana hoavy, tamin'ny fanoratana ny anaran'ireo maty an-tapitrisany, ireo mpifidy sandoka sy ny famerenana in-droa ny anaran'ireo mpomba ny Zanu-PF.
Noravàn'i Mugabe tsotra izao ireo media an'ny mpanohitra, noterena ireo gazetin'ny mpanohitra mba tsy hiasa afa-tsy any ivelan'ny firenena. Tolokevitry ny tatitra iray avy amin'i Abraham McLaughlin ao anatin'ny Christian Science Monitor ny hoe ireo fitaovana fanelingelenana onjampeo nomen'ny governemanta shinoa no nampiasaina mba hanakanana ireo onjampeo tsy miankina tsy hahafahany hifaninana amin'ireo onjampeo fehezin'ny Fanjakana.
Ao anatin'io tontolo io, azo marihina fa n'iza n'iza dia hanao fanamby amin'ny Zanu-PF avokoa miaraka amin'ny fanaovana tatitra anaty blaogy… saingy tena izay no ataon'ireo mahery fo ao amin'ny Sokwanele , “tarika mpanohana ny hetsika sivily”. Ahitana an'ireo hafatra avy amin'ireo mpikatroka tsirairay sy hatramin'ny an'ny fikambanana manontolo ihany koa ny vohikan'izy ireo, ary manome feo, fomba fijery ary vaovao avy amin'ny lafivalon'ny firenena raha eo am-piomanana ny handatsa-bato ireo vahoaka Zimbaboeana. Ahitana an'ireo tsahotsaho mikasika ny fidiran'i Shina antsehatra anatin'ny mety ho fanodinkodinana vatom-pifidianana ireo hafatra vao haingana.
Manaraka ny faritra namindràna toerana azy ao amin'ny renirano Nyanzane, tena matahotra ireo olona ary nilazàna hoe nitondra vata ireo Sinoa mba handresen'ny zanu.pf. Mihevitra ireo olona fa efa voasesika vato hampandesena ny zanu.pf ireny vata ireny.
Fikasàna hitarika an'ireo mpifidy amin'ny fanondrotana tambabe ny karama farany ambany indrindra.
Tonga niaraka tamina fepetra hafa mampisritaka ny governemanta – tamin'ity indray mitoraka ity mba hividianana ny vato ao an-drenivohitra. Amin'izao fotoana izao, nasondrotra 900% ny karama sy tombontsoan'ireo mpiasa an-trano nanomboka tamin'ny 1 martsa 2005.
Dia tena mino tokoa va re ity fitondrana halam-bahoaka sy banky rmpitra ity fa hoe adala vendrana ireo mpiasa an-trano ka noho ity fepetra tamin'ny ora farany ity dia hivadika amin'izay efa nomeny tokim-panompoana?
ary hafatra iray mampihetsi-po avy amin'i Noktula ao Bulawayo, mitondra ny lohateny hoe “Hirehareha aho mitafy ny lobako”.
Omaly, naharay ambonin'akanjo fanentanana aho avy amin'ny MDC. Tsy nampiasaiko ho toy ny “akanjo fitondra matory” izy io ho an'ny fiainako ao an-tokantrano. Hanaovako ilay izy rehefa mivoaka aho. Hirehareha aho manao azy, ary tsy hisy na iza na iza hisakana ahy! Ary rehefa tsy mitafy ilay ambonin'akanjoko aho dia tsy afeniko any anaty lalina amin'ny fihantonan'akanjoko ilay izy, any ambanin'ireo akanjo hafa rehetra toy ny nataoko fahiny. Tsy heloka ny fanohanana antoko malaza iray. Tsy hanan-tahotra aho.